Re कारण बजारहरूले ग्राहक वफादारी कार्यक्रममा अधिक लगानी गरिरहेका छन् Martech Zone
CrowdTwist, एक ग्राहक वफादारी समाधान, र ब्रान्ड इनोभेटरहरू २ Fort234 डिजिटल मार्केटरहरू फोरचुन 500०० ब्रान्डमा सर्वेक्षण गरियो कि कसरी उपभोक्ता अन्तर्क्रिया वफादारी कार्यक्रमहरूको साथ मिल्दछ। तिनीहरूले यो इन्फोग्राफिक उत्पादन गरेका छन्, वफादारी परिदृश्य, त्यसोभए मार्केटरहरूले कसरी वफादारी संगठनको समग्र मार्केटिंग रणनीतिमा मिल्दछ भनेर जान्न सक्दछन्। आधा सबै ब्रान्डमा पहिले नै औपचारिक कार्यक्रम छ जबकि% 57% ले भने कि उनीहरूले २०१ 2017 मा आफ्नो बजेट बढाउन लागेका थिए
किन मार्करहरूले ग्राहक वफादारी कार्यक्रममा अधिक लगानी गरिरहेका छन्?
ड्राइव सगाई - चाहे तपाइँ B2B वा B2C, ग्राहकहरू व्यस्त छन् र तपाईंको उत्पादनहरू वा सेवाहरूको सफल उपयोग सुनिश्चित गर्दैमा ध्यान र बढ्दो मूल्य सुनिश्चित हुनेछ।
लेनदेन बढाउनुहोस् - दिमागमा राख्दै र पुरस्कृत ग्राहकहरूले टचपोइन्टहरू बढाउँछन् र उनीहरूसँग व्यापार गर्ने अवसर गर्दछ।
खर्च बढाउनुहोस् - किनकि तपाईंले पहिले नै विश्वास अवरोध तोड्नुभएको छ, हालका ग्राहकहरूले तपाईंसँग बढी पैसा खर्च गर्नेछन् ... प्रणालीमा राख्नु उनीहरूलाई पुरस्कृत गर्नु महत्वपूर्ण छ।
जडानहरू सिर्जना गर्नुहोस् - ग्राहकलाई उनीहरूको प्रशंसापत्र बाँडफाँड गर्नको लागि पुरस्कृत गर्नु भनेको मद्दतको उत्तम मार्केटिंग हो जुन तपाईं कहिले पनि लगानी गर्न सक्नुहुनेछ।
जडान / लाभ डाटा - बुझेर तपाईंको ग्राहकहरूलाई के उत्प्रेरित गर्दछ, तपाईं अफरहरू निजीकृत गर्न सक्षम हुनुहुन्छ जुन तपाईंलाई थाहा छ उनीहरूमा रूचि राख्दछन्।
अधिग्रहण, अवधारणा, र upsell सबै एक सकारात्मक ग्राहक वफादारी कार्यक्रम कार्यान्वयन द्वारा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिन्छ। सबै ब्रान्डको% 57% ले ग्राहकको वफादारीलाई सफलको रूपमा देख्दछ, mult 88% जब कार्यक्रम मल्टिचेनेल हो! दुर्भाग्यवश, ब्रान्डको केवल १%% मा मल्टिचेनेल ग्राहक वफादारी प्रोग्राम छ किनकि पign्क्तिबद्धता, तैनाती, र डेटा स of्कलनको अवरोधका कारण।
टैग: ब्रान्ड आविष्कारकहरूभीडविद्ग्राहकग्राहक वफादारीग्राहक वफादारी मार्केटिंगग्राहक प्रतिधारणग्राहक पुरस्कारमार्केटिंग सर्वेक्षणसर्वेक्षण